भदौ १६ : काठमाडौँ जलेको त्यो दिन – MySansar
भदौ १६ : काठमाडौँ जलेको त्यो दिन
Posted on September 1, 2016 September 1, 2016 by Salokya
आज तपाईँहरुलाई म पुरानो दिनको स्मरण गराउन जाँदैछु। १२ वर्षअगाडि (२०६१ भदौ १६ मा) आज कै दिन काठमाडौं निकै तनावग्रस्त थियो। सिङ्गो काठमाडौं जलेको थियो। इराकमा नेपाली दाजुभाइ मारिएका कारण आक्रोशित जनसाधारण सडकमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला मैले खिचेका केही फोटो र इन्टरनेटमा भेटिएका केही फोटो तपाईँ यो ब्लगमा पढ्नसक्नुहुनेछ।
इराकमा अमेरिकी आक्रमण हुँदा त्यसको प्रभाव म आफूलाई पनि पर्छ भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। तर भयो त्यस्तै नै। त्यतिबेला म कार्यरत स्पेसटाइम दैनिक बन्द हुनुमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण इराकमा भएका घटना नै थिए। विश्वका एक भागमा भएको घटनाले अर्को भागमा बस्नेलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको उदाहरण हुनसक्छ यो घटना।
इराकको एक आतंककारी समूहले १२ नेपालीलाई अपहरण गरेको समाचार अगस्त २१ तारिखका दिन आएको थियो। दुई दिनपछि अपहरित नेपालीहरुको नामावली र तस्वीर पनि प्रकाशमा आयो। त्यतिबेला नेटमा निकै सर्च गरेर मैले अन्सार अल सुन्नाको वेबसाइट भेट्टाएर तस्वीर फेला पारेको थिएँ।
म्यानपावरका सबै सामान जलेर खरानी भए। फोटोः उमेश
अगस्त २३ मा फोटो प्रकाशमा आइसकेपछि सरकारले नेपाली नागरिक अपहरणमा परेको पुष्टि त गर्‍यो तर उद्धारका लागि भने कुनै हतार गरेन। अगस्त ३१ को दिन अचानक अपहरित नेपाली सबैको हत्या गरिएको समाचार आयो। त्यतिबेला म स्पेसटाइम दैनिकका लागि समाचार लेख्दै थिएँ। समाचार लेख्ने क्रममा नै दिउँसो अल जजिराको वेबसाइटबाट सबैभन्दा पहिले मैले यो खबर पाएको थिएँ। तत्काल त्यहाँ भएका सबै सहकर्मीहरुलाई जानकारी गराएँ। सबै “बिचरा!” भन्दै थिए। तर कसैले पनि भोलिदेखि यो कार्यालयमा काम गर्न आउनु नपर्ने गरी घटनाको विकास हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन्।
अल जजिराको समाचारमा नेपालीहरुको हत्या गरिएको भिडियो पनि इन्टरनेटमा राखिएको छ भनी लेखिएको थियो। तर त्यसलाई खोज्न निकै गार्‍हो भयो। साँझतिर पेज ले आउट सकाएर, पास गराएर घर हिँड्ने बेलासम्ममा भने मैले त्यो भिडियो फेला पारेर डाउनलोड गरिसकेको थिएँ। तर विन्डोज ९८ मा त्यो भिडियो खुलिरहेको थिएन। म्याक कम्प्युटरमा सारेर हेर्‍यौं तर त्यसमा पनि खुलेन।
राति बल्ल तल्ल एउटा अरबी फोरम साइटमा नेपालीको विभत्स हत्या गर्दै गरिएको तस्वीर भेट्टाएँ। पछि ओग्रिस डट कमबाट भिडियो पनि डाउनलोड गरेँ। तर त्यसलाई हेरपछि मेरो मनस्थिति कस्तो भयो, त्यो म यहाँ शब्दले वर्णन गर्न असमर्थ छु।
क्याम्पसका विद्यार्थीहरु चक्काजाम गर्दै। फोटोः उमेश
म्यानपावरमाथिको रिस चाहिँ केही अघि अपहरित नेपालीहरुले अन्तिम भिडियो सन्देशमा आफूलाई जोर्डन भनी इराक पठाइएको, प्रल्हाद गिरी नामका एजेन्टले आफूलाई फँसाएको भनी ज्यान बचाइदिन गरेको करुण पुकारको असर थियो। सडकमा प्रल्हाद गिरीलाई फाँसी दिनुपर्नेसम्म माग उठेका थिए। आज नौ वर्षपछि पनि मलाई थाहा छैन, प्रल्हाद गिरीले सजाय पाए कि पाएनन्। बरु सरकारले अनुमति नदिएका जोखिमयुक्त देशमा कामदार पठाउने एजेन्टहरुले हाकाहाकी काम गरिरहेको र त्यहाँ जान लालायित युवाहरुको भीड देखेको छु।
एकछिन पछि अर्थात् २ बजेदेखि राजधानीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लाग्यो र मेरो काम नेटबाट समाचार हेर्नुमा सीमित रह्यो। त्यसो त कर्फ्यु लाग्दा प्रहरीको आँखा छलेर शुन्य सडकमा हिँड्नुको मज्जा नै फेरि बेग्लै हुन्छ।
राति आएर सरकारले भोलि राष्ट्रिय शोक र पीडित परिवारलाई एक लाख क्षतिपूर्ति दिने र शव नेपाल फर्काउन पहल गर्ने घोषणा गर्‍यो। तर खै, अहिलेसम्म पनि ती शव नेपाल फर्किएको समाचार हामीले सुन्न पाएका छैनौं।
[तपाईँले पनि त्यतिबेलाको कुरा सम्झनुभएको छ? आखिर त्यो दिन किन सुरक्षा व्यवस्था त्यति साह्रो कमजोर भएको थियो? आफ्नो अनुभव बताउनुस्। ]
1 thought on “भदौ १६ : काठमाडौँ जलेको त्यो दिन”
अहिले पनि त्यो घटना सम्झिदा रगत उम्लेर आउछ । ति मानबरुपी हत्यारा दानब प्रती र आफ्नै तत्कालिन सरकार प्रती । एस्को मुख्य कारण सिङो अर्थतन्त्र धान्ने रेमिटेन्स भित्रायआउन खतरा मोलेका जनता लाई सकुसल फिर्ता ल्याउन सर्कार ले गरेको ढिला सुस्ती नै हो । ति निमुखा नेपाली को बिभत्स हत्या गरेर के पाए होलान? छ्यण्भर को आवेग ले झन्डै साम्प्रदाइक द्ङ्गा को रुप लिएको थ्यो । दिवङ्गत आत्मा को चिर सान्ती को कामना